IFraser Hall eYunivesithi yaseKansas (nqakraza ifoto ukunyusa). I-Credit Credit: Anna Chang
IYunivesithi yaseKansas (KU), e-Lawrence, eKansas, inamaba 28,000 abafundi. Uninzi lwezakhiwo lwenziwa kwinqitye esithathwe kwi-Kansas Flint Hills. Ukugqithiseka kwenye yeenduli, i-campus eyona nto inikezela abafundi bayo kunye nobuchule beendawo zokufunda kunye nokuzibandakanya. Xa uhamba ngekampus, omnye udibana nemifanekiso yeentaka zengqungquthela ezibizwa ngokuthi nguJayhawk onobunikazi beyunivesiti. Eyaziwa ngokubanzi ngenxa yokuzikhukhumeza kwesikolo esinomdla, i-KU yezemidlalo ye-campus imifanekiso emininzi ye-mascot yesikolo, i-Jayhawk, ukuhlonela amaqela okulwa nobugqila ekuqaleni kwe-War War Kansas.
Ifoto yethu yokutyelela iqala ngoFraser Hall, isakhiwo esihlala kwinduli ephakamileyo e-Lawrence. Uphahla lwaso olubomvu kunye neeflegi ezibonakalisa izibhengezo ziza kubamkela abasandula njengoko beqhuba u-Lawrence ukusuka phakathi. UFraser uhlala kwi-Anthropology, i-Sociology ne-Psychology Departments, kodwa uboleka eklasini kwizifundo ezahlukeneyo. Njengenye yezakhiwo ezindala kwi-campus, uFraser uyaqhubeka nokuzimela ngokuzimela kwi-ON ngaphezulu kweNtaba ye-Oread.
Amanqaku afana ne-KU:
Yunivesithi yaseKansas Profile
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph ye-KU Admissions
IQumrhu leMFETHO Ukuqhathaniswa kweeKholeji zaseKansas
I-SAT Score Ukuthelekiswa kweeKholeji zaseKansas
IHolo yaseBudig kwiYunivesithi yaseKansas
IHolo yeBudig kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
Enye yezakhiwo ezitsha kwi-campus, iHolo Hall idibanisa noHoch Auditoria apho uJames Naismith wakhela ibhasikidi. I-Budig iqulethe iindibano zeentetho ezintathu ezihlalisa abafundi abangama-500, aba-1000 kunye nama-500 kwakunye neelabhu ezininzi zeekhompyutheni. Iholo alizange libukeka lifana nesakhiwo esiphezulu esinezakhiwo ezininzi namhlanje. Kungekudala, ihholo yahlaselwa ngumbane kwaye yayidinga ukulungiswa kwakhona. Amandla amakhulu okuhlala kwiiholo zeentetho zibenza zibe zilungele iiklasi eziqhelekileyo zemfundo.
USmith Hall kwiYunivesithi yaseKansas
UShelm Hall kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
Isifanekiso esikhulu sikaMoses sicacisa ngokugxila kwesi sakhiwo - Izifundo zeNkolo. Isifanekiso phambi kwesi sakhiwo sibheke ngasenyakatho ukuya kwiwindi yecala ebonakalayo ebonakalisa iBrining Burning evela kwiNcwadi yeEksodus. Iholo liqukethe enye iholo yokufundisa, iiklasi ezimbini, ilayibrari kunye neefisi ezininzi zeSebe leZifundo zeNkolo.
UMarvin Hall kwiYunivesithi yaseKansas
UMarvin Hall kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
Ekhaya ukuya kwiSikolo soBugcisa, abafundi bavame ukubiza uMarvin Hall ngokuthi "Lighthouse of the Hill" kuba izibane zikhanya ngaphakathi ngaphakathi malunga ne-24/7 ngenxa yabafundi abatshisa ii-oyile zobusuku basebenza kwiiprojekthi. Kukwaziwa kwakhona ngokutya okukhawuleza kokutya okuwenziwe kuLawrence. IHolo idibanisa neSikolweni soBugcisa kunye noKlanywa ngebhulobha esibhakabhakeni kuba abafundi besikolo ngasinye bahlala bebambisana.
IHolo leHlabathi kwiYunivesithi yaseKansas
IHolo leSiqalo kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza ifoto ukunyusa). I-Credit Credit: Anna Chang
IHolo yeHlabathi ihlala kwiiMathematika, i-Economics kunye neNkcazo yokuSingqongileyo kwi-KU. Esi sakhiwo sasisungulwe kumyuziyam kodwa kamva saqhekeka kwaye savuselelwa ukuba sibukeke njengeqonga kwi-Disney's Snow White . Kuwo wonke unyaka, abafundi bajonge ngaphandle kweHolo yeHlabathi ukubamba ibhasi ukuya kwezinye iindawo zesixeko kuba yonke ibhasi yaseLawrence ihamba apho.
I-Anschutz Library kwiYunivesithi yaseKansas
Anschutz kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
I-Anschutz yenye yeelayibrari ezisixhenxe kwi-KU. Iphethe amagumbi amaninzi okufunda, i-coffee encinane kubafundi abafuna loo ma cafeine emini, kunye nelayibhile ezininzi zeekhompyutheni. Indawo efanelekileyo yokufunda iqela, i-Anschutz nayo ibamba iqoqo elikhulu leeteksikthi zobugcisa ukuba abafundi basebenzise uphando lwabo.
I-Spencer Research Library eYunivesithi yaseKansas
I-Library ye-Spencer Research (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
I-Library ye-Spencer Research yibamba iqoqo ekhethekileyo yeencwadi ezinqabileyo ezivela kwimibhalo yesandla yamandulo nakwixesha elide ukuya kwizibhalo zezopolitiko zangoku. Ngenxa yobuninzi beencwadi ezithathayo, ithala leencwadi livala iisitaki zalo. Igumbi lokufunda lisoloko lihlala livulekile kuluntu, nangona kunjalo. Igalari yaseNyakatho ibeka amashalofu kwiithala zeencwadi emva kweefestile zeglasi. Umbono weSikhumbuzo seSikhumbuzo kunye neCampanile, izikhala zokufunda ezinokuthula, kunye neqoqo elikhulu leencwadi zenza ukuba intliziyo ye-bibliophile ikhule.
IThala leMathala kwiWunivesithi yaseKansas
I-Watson Library kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
I-Library yaseWatson, eyaziwayo ngokuthandana njengeZiqwenga, iphethe imiqulu yezigidi ezi-2 kunye nezinye iindidi zemfundo. Abafundi bakubiza ngokuba yizitatshi kuba iincwadi zibanjwe phezulu ngaphezu kwentloko enye ukuba idide iyadingeka ukufumana incwadi yenzala. Indawo efanelekileyo yokufunda, iisitye zinika indawo ezininzi zokufihla abafundi abafuna ukuzinza.
Iingxowa zokuxoka kwiYunivesithi yaseKansas
Ikohliso leziko kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
Iingxowa zobuxoki zisebenza njenge-KU yenkcubeko yenkcubeko ngokubamba imiboniso eyahlukeneyo, iikonsathi kunye neziqu. Ubonisa njenge-Blue Man Group, i-Transiberian Orchestra kunye ne-Spring Awakening, i-Anda Union, uMamma Mia (ukuluhlu lwabambalwa) zifumaneka kubafundi kwisaphulelo. Iziko likhonza njengendawo epheleleyo ye-KU kubafundi kwezobugcisa ngenxa yobuchule bayo be-2,000.
ULippincott Hall kwiYunivesithi yaseKansas
ULippincott Hall kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
ULippincott Hall ungumntu weHhovisi lokuFundelwa kwamanye amazwe, i-Applied English Centre ne-Wilcox Museum. Umnyango umi emva kweentsika ezibini zamaGrike namaRoma ezenza ukuba umfundi abe nomuhle xa ehamba. Ngaphambi kweholo kukho umfanekiso kaJames Green, uMlawuli weSikolo soMthetho, ukukhangela isigxina somfundi. Izihlandlo ebusika, umntu unokufumana iinqwelo ezifakwe kwiDean kunye nomfundi ukuba azigcine zifudumele.
IHolo yeSpooner kwiYunivesithi yaseKansas
I-Spooner Hall kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
Njengoko isakhiwo esidala kunazo zonke kwi-campus, i-Spooner Hall ibonisa ubungqina bokuba ixabiso le-KU lembali kunye nesithethe. Ekuqaleni eyakhiwe njengelayibrari, ngokuhamba kwesikhathi yaba iMyuziyam yoBugcisa ne-Anthropology. Ngaphezulu kwe-archway, amagama athi "Ofumana ubulumko uyifumana ubomi" uyabonakalisa ubuncwane kwizinto zobuncwane ngaphakathi. Namhlanje, abafundi nabavakatyeleli abavakatyelayo bangahlaziya iqoqo le-anthropology nanini na xa befuna.
I-Dole Institute of Politics eYunivesithi yaseKansas
I-Dole Institute of Politics kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza ifoto ukunyusa). I-Credit Credit: Anna Chang
Umrhumo ngo-1996 umongameli wokhetho, uRobert J. Dole, i-Dole Institute isebenza njengendawo yokuba abafundi bafunde kabanzi ngezopolitiko. Iziko libuye libe nomboniso ngobomi bukaBob Dole, iincwadi zokugcina kuzo zonke i-Congress ze-congressional papersal, kunye neenkomfa ezineentetho ezininzi zoluntu ezifuna ukwabelana ngamava abo nabafundi. UBob Dole wanikela ngamaphepha akhe e-congressional ukunika abafundi ithuba lokufunda ngakumbi malunga nobunkokheli, inkonzo yoluntu, kunye necala elifanelekileyo lezopolitiko.
I-Kansas Union kwiYunivesithi yaseKansas
I-Kansas Union kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
I-Kansas Union isebenza njengeziko lezentlalo kubo bobabini nabafundi. Emile kumanqanaba amathandathu, i-Union iyinto enye yezona zakhiwo ezinkulu kwi-campus kwaye inamandla amakhulu kwiziganeko zentlalo. Kwi-1st floor, abafundi bangahamba ngomkhombe kwi-Jaybowl okanye bahlale phantsi kwiNest Hawk ukuze bathathe indebe yekhofi. Umgangatho wesi-2 uqukethe isitoreji sencwadi yaseyunivesithi apho abafundi bangathengela khona iincwadi zabo zezifundo zonyaka wesikolo okanye i-KU gear kwisitoreji esilungeleyo. Umgangatho wesithathu kubheno kubafundi kuba banokubamba ukutya phakathi kweeklasi, ukudibana neLuntu ngeeNkonzo zoLuntu ukuze bafumane umsebenzi wexeshana, okanye bafumane inwele. Kwinqanaba le-4, abafundi bangaya kwii-fairs, bafake isheke kwi-bhanki, okanye bathabathe ikhofi. KU abafundi bathanda i-caffeine yabo! Umgangatho we-5 kunye no-6 ubambe ibhola yeibhola kunye nezindwendwe kwiziganeko ezinkulu ezifana nezithethi zezivakalisi.
IHolo elinamandla kwiYunivesithi yaseKansas
IHolo eliqinileyo kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
Kukho phakathi kwenkampus, Izenzo ezinamandla njengezakhiwo zokulawula zaseyunivesithi. Omnye unokufumana iofisi zeKholeji yoBugcisa boBugcisa nezoNzululwazi, iNcedo lwezeMali, iTutoring, Izidingo zokukhubazeka, Ukuphumelela kwabafundi, izifundo zoPhuculo lweSikolo, iKhansela, iProst, kunye nohlu oluqhubekayo. Umqolo omude we-tulips entwasahlobo kunye nomfanekiso we-bronze we-pounds wama-600 we-Jayhawk ukwandisa ukubukeka okubukhulu kwesi sakhiwo.
Allen Fieldhouse kwiYunivesithi yaseKansas
I-Allen Fieldhouse kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
"Qaphela i-Phog." Isilumkiso esibangelayo nayiphi na iqela elichasayo elijongene neqela leKansas Jayhawk basketball kwikomiti yabo yasekhaya. Ebizwa ngokuba ngumzukulu we-KU, uDkt Forrest C. "Phog" u-Allen, i-Fieldhouse ibonwa ngokuba yiyo kuphela imimangaliso ye-acoustics kodwa nakwabemi besizwe esithandana nabo ababetha i-bleacher ngexesha le midlalo yasekhaya. I-Jayhawks ikhuphisana kwiCandelo le-NCAA I- Conference 12 enkulu .
ISikhumbuzo seSikhumbuzo kwiYunivesithi yaseKansas
ISikhumbuzo seMidlalo yeSikhumbuzo kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Anna Chang
Ebizwa nge-KU abafundi abafa bekhonza kwiMfazwe Yehlabathi I, le midlalo ibonisa umdlalo webhola kunye nomzila kunye nensibano iyadibana. I-50,000 fan fan yenza inzondelelo enkulu kwiintsuku zemidlalo eyenza umoya onzima kakhulu we-Jayhawk. Ubume bamahashe buvumela imbonakalo emihle yemidlalo kwaye idibana neCampanile.
UDaisy Hill eYunivesithi yaseKansas
UDaisy Hill kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
Uninzi lweendawo zokuhlala zaseyunivesithi zifumaneka kwi-Daisy Hill. Ezi ziquka i-Templin, kunye namagumbi aloo-suite-style, uLee kunye nesidlo esikhulu, uHashinger kunye nomxholo wayo wobugcisa, u-Ellsworth noMcCollum. Intsapho yam intandokazi yiHashinger kuba izayo ifakwe ngamagumbi amaninzi omculo kunye nesiteyimu somdaniso ukulungiselela abafundi bayo bokufunda.
Chi Omega Umthombo kwiYunivesithi yaseKansas
Chi Omega Umthombo kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza ifoto ukunyusa). I-Credit Credit: Anna Chang
Ukuphuka okuqabulayo kwizakhiwo ezininzi kwi-campus, i-Chi Omega Fountain ivuyisa ngokukhululekileyo phakathi kwidolobho yabantu abadlulayo. Umthombo uphinde uqale ukuhamba kwawo ngonyaka ngamnye ngosuku lokuqala lwenkqubela. Omnye umxholo we-KU uthi abafundi baya kuphoswa ngabahlobo babo ngemihla yabo yokuzalwa, ngoko banethemba lokuba awunalo usuku lokuzalwa ebusika!
IWescoe Beach kwiYunivesithi yaseKansas
I-Wescoe Beach kwiYunivesithi yaseKansas (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Anna Chang
Ibhantshi ihleli phambi kweWescoe Hall kunye neStong ephakathi kwekampus. Nangona kungekhona nje ulwandle, abafundi abaninzi bayiphatha njengomnye ngokukhawulela kwi-konkrit surface kunye nokubamba ilanga. Abafundi banandipha isidlo sasemini kunye neziganeko zokuphromotha ezihlala zihlala kwiBhangi ngenxa yendawo efanelekileyo. Ngexesha leveki leKlebe, ixesha lokuqhelanisa ukufundisa abafundi abatsha baqhelane kunye nobomi bekholeji ngokubanzi. I-KU izikhukula iWescoe Beach kunye nesihlabathi somdlalo we-volleyball kunye ne-awardaways. Isiqhelo esithile sesigxina seendlela, abafundi bawenza le ndawo ibe yindawo ehambayo kwaye iyenzeka.
ICampanile eYunivesithi yaseKansas
ICampanile eYunivesithi yaseKansas (nqakraza ifoto ukunyusa). I-Credit Credit: Anna Chang
Inqaba yebell ye-KU isebenza njengesikhumbuzo sexesha kunye nesilumkiso kubafundi. Ngaphezulu kweyure nganye, umfundi ovela kwiSikolo soMculo udlala iintsimbi, ezingakuvakala ngaphezu kweeyure. Ngomhla wokugqweswa, bonke abafundi abaphumelelayo bahamba ngeCampanile ukuphawula ukuphela kohambo lwabo njenge-KU umfundi. I-Campanile igqiba yonke imini ukuvumela lonke idolophu ukuba i-KU iyona nto ikulungele ukuphuma ehlabathini. Ingqungquthela inokuba umfundi ohamba ngeCampanile ngaphambi kokugqweswa akuyi kuphumelela kwiminyaka emine.
I-Dihydrogen Monoxide Safety Hoax
Imbali ye "Yankee Doodle"
I-Admissions yeYunivesithi yaseCreighton
I-Best Metal Metal Album Covers
Ukuthetha Ngezenzo Zakho - Iingxoxo zeeNgesi zesiNgesi
Imithandazo Yenkululeko kuMhla Wokuzimela
I-American Beech, Umthi oqhelekileyo eMntla Melika